ivenkile — UHAMBO LEE
Ishicilelwe kwi White, 100% kwenye sub edayi t-shirt
Tagless kunye tag ubungakanani yesiko screen eprintiweyo
isiko 116 ileyibhile kombhinqo imibhojana kwi emqukumbelweni ezantsi. Elingaphantsi eleyibheli ifundeka, “Kuba andinazintloni”.
phakama – incwadi
phakama – ialbham
Icwecwe banokukufundisa kakhulu. Ngeendlela ezininzi, Ntombikayise ngumgangatho wokugqibela ekusasazeni umyalezo osuka, relay zifundo, kwaye babhiyozele ubomi ayiginyeki, uhlobo akhokelela. Yiloo nto kanye into Trip Lee wenza ngokupheleleyo-ubude icwecwe lakhe yesine, “Kuvuka.”
Ukuze ukudlulisela isigidimi sakhe, Uhambo wathabatha indlela eyahlukileyo zokurekhodisha Lento kwixesha. Kunokuba isebenzisana abavelisi ezininzi, wasebenza kuphela kunye umvelisi elide Gawvi lonke yelicwecwe e Atlanta studio yakhe.
Ishicilelwe kwi Black, 100% khonkcweni-basonta cotton T-shirt.
Ishicilelwe inks soft-isandla, ngoko ke yokushicelela ethambileyo xa uyibamba.
Iihempe aba tagless kunye tag ubungakanani yesiko screen eprintiweyo.
isiko 116 ileyibhile kombhinqo imibhojana kwi emqukumbelweni ezantsi.
Elingaphantsi eleyibheli ifundeka, 'Kuba andinazintloni'.
Ezi iihempe si kekile kuhlisa. Ukuba awuyithandi iziqwenga Ukuhlisa kufanelekile, ke kucetyiswa ukuba iyalele ubungakanani phezulu.
Ubomi Good – incwadi
imoto wawumhle, indlu enkulu, whatever your heart desires. Everybody wants to live The Good Life. But what happens when dreams become nightmares and the promise of freedom leads to a life of imprisonment? Kwenzeka ntoni xa ufumanisa ukuba konke oko igolide ulahlekelwa ubumenyemenye yayo? Maybe the rich and famous aren’t living The Good Life. Maybe our dreams are rooted in lies. kwaye mhlawumbi, nje mhlawumbi abo engaphantsi ngokwenene bendingaba ngakumbi. Yintoni ubomi Good…ngenene?
Kule ncwadi, obizwa emva icwecwe lakhe eyaziwa yesine, Ubomi Good, rap igcisa christian kunye nombhali, Trip Lee, uveza ukuba ihlabathi, yenyama uMtyholi ukukhuthaza njengoko ubomi ngeyona ezanelisayo. Yena ke ngoko icacisa ukuba yintoni ngokwenene Ubomi Ulungile: ubomi sinokulinandipha ukanti ngaphaya nantoni na kweli hlabathi. Cinga nje: Ubomi Good. – inqwelo erhuqwayo #1 – inqwelo erhuqwayo #2
Ubomi Good – ialbham